Global Voices teny Malagasy » Raha hiverina ao Shina ny Google, dia hanaraka ny fepetran’ny governemanta. Dia ahoana ny zon’olombelona? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Septambra 2018 11:37 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Tatitra iray navoakan'ny The Intercept  nivoaka tamin'ny voalohany aogositra no nilaza fa mety hamoaka tsy ho ela ny endrika voasivana amin'ny milina fitadiavana ao Shina ny goavana Google.
Raha nandao ny tsena shinoa  ny Google, notanisan'ireo tompon'andraikitra ny fanahiana manoloana ny zon'olombelona, sivana, sy sakana amin'ny fahazoam-baovao. Ary tsy miova ireo fepetra ireo — Vao tamin'ny taona 2016 i Shina no nandany ny lalànan'ny fiarovana an-tserasera  izay hanamafy ny fomba fanaraha-maso sy fanivanana efa henjana mihatra ao Shina ary tsy maintsy manolotra ny data-n'ny mpisera, tafiditra amin'izany ny lakile fanafenan-tsoratra, araka ny fangatahana ofisialy ny orinasa vahiny miasa ao Shina.
Milaza ny loharanom-baovaon'ny The Intercept fa nihanandeha haingana ny tetikasa Angidina tamin'ny desambra 2017 taorian'ny fihaonan'i Pichai tamin'ny ideôlôgy faratampon'ny Antoko Komonista Shinoa, Wang Huning. Heverina fa efa nanao fampisehoana fanandramana teo anoloan'ny manampahefanan'ny governemanta shinoa ny ekipan'ny Google. Raha tafavoaka moa io fampiasa io dia tsy maintsy hifaninana amin'i Baidu , mili-pitadiavana ao an-toerana izay mibahana ny tsena shinoa.
Manamafy ny loharanom-baovaon'ny The Intercept fa mety hivoaka ao anatin'ny enina na sivy volana ny endrika farany amin'ilay fampiasa, rehefa azo ny fankatoavana ofisialy. Saingy tsy ho mora ny fahatongavan'izany. Tamin'ny 3 aogositra ny seha-baovao miankina amin'ny fanjakana shinoa Securities Daily niampanga ny tatitry ny The Intercept  ary nanatsonga ny filazan'ny Shinoa mpamakafaka iray milaza fa tsy ho afa-miditra indray ao Shina ny Google ao anatin'ny hoavy akaiky.
Mety ho fampitandremana ho an'ny mpifaninana aminy miorina ao Sillicon Valley ny zavatra vao haingana nanjò ny goavan'ny teknolojia Facebook tao Shina. Roa andro monja taorian'ny nanambaràn'ny Facebook hanokatra foibem-panavaozana ao Shina, niditra an-tsehatra ny Fitantanana ara-tserasera shinoa ary nanakana ny Facebook  tsy hahazo lisansa hiasana.
Ny loharanom-baovao tsy nanonon-tena avy ao amin'ny Google no niteny tamin'ny The Intercept  hoe:
Nipoitra indray ny Apple Inc. androany. Mihoatra ny 100 miliara dolara amerikana ankehitriny ny lanjany eo amin'ny tsenam-bola. Ny lakilen'izany fitomboana izany dia ny fiakarana 40% ny varotra i-phone tao amin'ny tsena shinoa nandritra ny telovolana fahatelo . Ao anatin'izao ady ara-barotra ifanaovan'i Shina sy ny Etazonia izao, nanahy ny amin'ny hoavin'i Apple ny tsena. Fa ny varotra betsaka vitany nandritra ny telovolana fahatelo no nampiakatra ny fitokisan'ny tsena. Manomboka mino ny tsena fa nahita ny lalany ho tafavoaka amin'ny ady ara-barotra ifanaovan'i Etazonia sy i Shina ny Apple Inc. amin'ny fampiasana ny teti-panorona ara-pihariana “ho an'ny firenena iray manokana”. Io angamba no nahatonga ny “fanovan-tetipanorona” ampiharin'ny Google.
Tamin'ny febroary 2018 ny Apple Inc. namindra ny fikirakirana ny foiben-dahatahiry iCloud  ho ao Shina tanibe ho ao amin'ny orinasa iray tantanin'ny fanjakana antsoina hoe Guizhou-Cloud Big Data. Na dia nanoritra aza ny orinasa fa mbola izy no mifehy ny lakile fanafenan-tsoratra amin'ny kaontin'ny mpisera, ary tsy nomeny ny mpiara-miombon'antoka aminy ao an-toerana izany, dia mbola manahy ihany ny Shinoa mpisera fa voantohintohina ny fiainany an-takonana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/07/124181/
 Tatitra iray navoakan'ny The Intercept: https://theintercept.com/2018/08/01/google-china-search-engine-censorship/
 nandao ny tsena shinoa: https://googleblog.blogspot.com/2010/03/new-approach-to-china-update.html
 lalànan'ny fiarovana an-tserasera: https://mg.globalvoices.org”https://globalvoices.org/2015/07/10/legalizing-the-great-firewall-chinas-new-cyber-security-law-would-codify-censorship-shutdowns/”
 niampanga ny tatitry ny The Intercept: http://www.zqrb.cn/usstock/2018-08-02/A1533176621192.html
 nanakana ny Facebook: https://variety.com/2018/biz/asia/china-reverses-facebook-planned-office-opening-1202886660/
 fiakarana 40% ny varotra i-phone tao amin'ny tsena shinoa nandritra ny telovolana fahatelo: https://www.zdnet.com/article/apple-posts-record-services-revenue-solid-iphone-sales-in-q3/
 namindra ny fikirakirana ny foiben-dahatahiry iCloud: https://mg.globalvoices.org”https://advox.globalvoices.org/2018/02/10/how-apple-is-paving-the-way-to-a-cloud-dictatorship-in-china/”